Maldini oo talo ku darsaday halka ay tahay in Verratti u dhaqaaqo xagaagan – Gool FM
Maldini oo talo ku darsaday halka ay tahay in Verratti u dhaqaaqo xagaagan
Kaafi June 15, 2017
(Milan) 15 Juunyo 2017. Iyada oo uu Marco Verratti yahay mid ka mida xiddigaha loogu doon doonka badan yahay suuqa xagaagan, laacibka khadka dexe xiiso weyn ayaa uga imanaya Barcelona, hadda, halyeygii hore ee kubadda cagta Talyaaniga Paolo Maldini ayaa aragtidiisa ku darsaday.
Daafaca ciyaaraha ka fariistay waxa uu yiri In xiddigga uu ka tago Paris Saint – Germain waa xulashadiisa ugu wanaagsan.
“Verratti waa qeryl-qaadi, waxa uu leeyahay tayo is kabta, waxaaana qabaa in uu horumari doono hadii uu ka tago Paris Saint – Germainn oo uu isku dayo khibrad cusub,” Maldini waxa uu sidaas u sheegay Calciomercato.com
“Barcelona dabcan waxa ay ahaan doontaa jihadiisa ugu wanaagsan waxaana sidoo kale qabaa in uu ciyaaryahan wanaagsan u noqon doono Barcelona.”
Marka laga yimaado xiisahaas, kooxda reer France dooni meyso in ay siideyso laacibka.
Funaanadaha Barcelona iyo Real Madrid oo uu dagaal suuqa ah ka dhex qarxay
Maxaa cakirinaya heshiiska kooxaha Inter iyo PSG ee Moura?